မြန်မာ တို့ အတွက် Guitar ဗဟုသုတ
ကမ္ဘာ့ ကျော် Guitarists အယောက် ၁၀၀ ကို မြန်မာတို့သိစေခြင်းငှာ ဖေါ်ပြအပ်ပါသည် သူတို့ ကို Rolling Stone က အဆင့်များသတ်မှတ်ပေးထားသည့် အတိုင်း ဖေါ်ပြပေးလိုပ်တာဖြစ်ပါတယ် သို့ သော်လည်း အခြားသော Gibson.com, Guitarworld.com,Billboard, Hit Parader American music magazine နှင့် Time magazine ပေးထားသော အဆင့်များနှင့်တော့မတူပါ ဒီအချက်များကိုထဲ့သွင်း ဖေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ တေးဂီတ လောကအတွက် KORG ရဲ့ Volca Beats Analog Drum Machine အကြောင်းလေးကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် DJ နဲ့Techno ၈ီတများကိုဖန်တည်းရန် အလွန်သင့််တော်သောစက်များဖြစ်ပါတယ် KORM ရဲ့ထုပ်လုပ်မှု များဖြစ်တဲ့ Volca Series များဖြစ်တဲ့ Volca Key, Volcs Bass နဲ့ Volca Sample တို့ အကြောင်း Post များကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။
ထူးအိမ်သင် သီဆိုသွားတဲ့ မူရင်းသီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် ထူးအိမ်သင် အမှတ်တစ်ရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
JOHN FOGERTY "Mystic Highway"
Lately I begin to wonder,
How's it all gonna end.
Then it’s gone with the wind.
JOHN FOGERTY - The old Man Down The Road (Remix)
ဦးကျော်ဟိန်း သီဆိုသွားခဲ့သော မူရင်း သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ် ဦးကျော်ဟိန်း အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဦးကျော်ဟိန်း ကတော့ သာသနာဘောင်မှာ အပျော်ကြီးပျော်နေရောပေါ့
Zoom G1on နှင့် G1Xon မိတ်ဆက်
2) Zoom G1on နှင့် G1Xon
Zoom ကုမ္ပဏီက Multi-effects Processor များကို ဦးဆောင်ထုပ်လုပ် နေတာ ၂၅ နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီ သူတို့ တီထွင်ထုပ်လုပ်လိုက်တဲ့ Stomp-Box Effects Pedals များဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရေပန်းစားခဲ့တာကြောင့် သူတို့ တော်တော်လေးဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ယ္ခု သူတို့ က G1on နှင့် G1Xon တို့ ကိုထုပ်လုပ်ဖြန့် ချီ နေပြန်ပါပြီ
VOX Dynamic Looper Guitar Effects မိတ်ဆက်
1) VOX Dynamic Looper Guitar Effects
Vox Company က Boss နဲ့Digitech တို့ နဲ့ ရှင်ပြိုင်ဘို့Looper ဈေးကွက်ထဲကို 2012 ခုမှာဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဝင်လာတဲ့နေရာမှာ ဘာတွေများထူးထူးချားချားလုပ်ဆောင် ထားသလဲဆိုတာ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ် ဒီအတွက် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို့ မှမျှော်လင့်မထားတဲ့ ထူးခြားမှု တွေကိုတွေ့ ရတယ်
Born to push you around You better just stay down You pull away, he hits the flesh You hit the ground
Mouths so full of lies Tend to black your eyes Just keep them closed Keep praying, just keep waiting
Waiting for the one The day that never comes When you stand up and feel the warmth But the sunshine never comes, no No, the sunshine never comes
Push you cross that line Just stay down this time Hiding yourself, crawling yourself You'll have your time
MIGRA Carlos Santana
Migra Migra pinche Migra déjame en paz Migra Migra pinche Migra déjame en paz
Malicia veo en tus ojos desprecio en tu corazon Malicia veo en tus ojos desprecio en tu corazon
Kelly Rowland, Motivation Lyrics
Oh lover, don't you dare slow down Go longer, you can last more rounds Push harder, you're almost there now So go lover, make mama proud
And when we're done I don't wanna feel my legs And when
http://www.thetoptens.com/guitarists/ The Best Guitarists Links
Cracker လမ်းညွှန် ၂
Basic DNN Hacking မြန်မာပြန် PDF
106} Synyster Gates
ကမ္ဘာကျော် ဂစ်တာပညာရှင်များ
မြန်မာ MP3 သချင်းများ
မေးမြန်းလိုပါက Email ဖြည့်ပြီးမေး နိုင်ပါသည်